Guddoomiyayaasha Gobollada punland ku xigeenadoodu waxay leeyihiin xasaanad xil, sidaa awgeed lama xiri karo lamana baari karo jirkooda, Degaankooda iyo gaadiidka ay markaas wataan, haddii aan Madaxweynuhu ogolaan codsi xasaanad ka qaadis oo uu soo dastuurkq Xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud, ama aan lagu qaban iyagoo faraha kula jira fal dambiyeed culus.
International Institute reaches milestone in assisting refugees – STLtoday. Hawlwadeennada Xafiiska Difaaca Xuquuqda Aadanaha. Qodobada 1aad, 2aad iyo 3aad ee Madaxa I, qaybtiisa 1aad ee Dastuurka, waxaa wax lagaga badali karaa afti dadweyne oo qura. Maxkamadda Dastuuriga ah ayaa ilaalinaysa inaan qofna xaquuqdiisa lagu xad gudbin, sharci gaar ah ayaana qeexaya sida Maxkamadda Dastuuriga ay u gudanayso xilkaas. Shuruudaha lagu dooranayo Duqa Degmada waa kuwa ku xusan qodobka aad ee Dastuurka.
Shaqaalaha fasaxa ku dsatuurka waxba iska dhimi mayaan xuquuqdooda mushaar. Xarunta Hantidhawrka Guud waa Caasimadda Puntland, wuxuuna leeyahay awood ku baahsan Puntland oo dhan. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu aasaaso, ka mid noqdo ama ka qayb qaato hawlaha ururada dhaqan-dhaqaale, bulsho, Isboorti dadtuurka cilmi, haddaan sharci ka reebin. Qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu dacwad qaanuunka waafaqsan ka furto maxkamadda awoodda u leh.
Akhriso Dastuurka Cusub ee Dowlada Puntland
In qofku yahay garaad-dhimman, ama Maxkamadi caddayso inaanu gudan karin xilkiisa. Aasaasidda ururadu waa inay waafaqsan yihiin qaanuunka dalka iyo danaha ummadda Puntland. Magacaabidda guddiyo gaar ah oo gacan ka siiya gudashada xilkiisa.
Sharci dastuurja ah ayaa tilmaami doona wakhtiga iyo habraaca tirakoobka. Sharci gaar ah oo baarlamaanku ansixiyay ayaa qeexaya dhaqangelinta qodobka Qofka maxbuuska ah waxaa lagu dhaqayaa xuquuqda caalamiga ah ee maxaabiista.
Dawladda Puntland waxa ay yeelan doontaa Calan, Astaan iyo Heesta calanka oo u gaar ah. Eedaysanaha laguma hayn karo meel aan qaanuunku bannayn.
Sharci kasta oo Goluhu meelmariyo waa in laga sameeyo saddex nuqul oo rasmi ah oo ay saxiixaan dasyuurka Goluhu loona diro Madaxweynaha.
Markii soo jeedinta ay soo gaarto Golaha Wakiillada, waxaa falanqeynaya guddi gaar ah.
In qofku ku jiro xabsi xukun-suge ah ama mid maxkamadi ku xukuntay. Final jury selection in Somali piracy case delayed – AP. Eedaysanaha waxaa loo aqoonsan yahay dembilaawe ilaa si qaanuunka waafaqsan maxkamadi ugu xukunto gelid denbi. Waa inaan la laalin xuquuqdiisa muwaaddinnimo shantii 5 sano ee ugu dambeysay.
Dejinta, xiriirinta iyo hirgelinta istaratejiyadda siyaasadeed ee ku saabsan amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada. Qofka muslimka ahi caqiidadiisa kama noqon karo.
Dawladda waxaa waajib ku ah horumarinta iyo dammaanad qaadka xuquuqda haweenka. Qof kasta xor buu u yahay fikraddiisa waana soo bandhigi karaa. Mar haddi la shaaciyo, sharcigu wuxuu dhaqangalayaa shan iyo toban 15 maalmood gudahood, haddii uusan ahayn mid loogu dhawaaqay intifaac caam ah, kaasoo dhaqangalaya isla markiiba. In uu diyaariyo qareen difaaca, haddii eedeeysanuhu awoodin in uu qabsado qareen. Guddiga gaarka ah ee dib u eegidda Dasturka Puntland wuxuu Dastuurka Puntland waafajinayaa kan Federaalka, iyadoo uu mudnaanta leeyahay Dastuurka Federaalka.
Goluhu waxa uu yeelan karaa la-taliyayaal iyo karraaniyaal isku dubbarrida doodaha iyo warbixinnada guddi-hoosaadyada. Carruur waxaa loola jeedaa qof kasta oo siddeed iyo toban sano 18 ka yar, xagga Shareecadana waa sida ay qabto. Muwaadinnimada Puntland waxaa difaacaya sharci gaar ah, waxaana qeexaya xeer gaar ah sida lagu heli karo ama lagu waayi karo jinsiyadda Puntland.
Inta laga gaarayo aburitaanka Guddiga Doorashada Puntland ee rasmiga ah, waxaa jiraya Guddiga Doorashada Puntland ee ku meelgaarka oo ka kooobnaanaya 9 xubnood sida ku cad lifaaqa 1aad ee Dastuurkan. Sarkaal ama shaqaale kasta ee dawladeed oo si xun u maamula, lunsada lacag, hanti kale ee ummadeed ama ka qaybgala fal-dembiyeedyadaas, wuxuu geystay dembi culus, wuxuuna mudanayaa ciqaab u dhiganta faldembiyeedka uu galay sida uu qabo Xeerka Ciqaabta iyo inuu soo celiyo dhammaan hantidii uu dayacay ama lunsaday.
Haddii Xukuumaddu muddo shan vastuurka toban 15 maalmood ku soo jawaabi weydo, waxaa loo qaadanayaa in ay aqbashay isbdalka. Madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay dwstuurka muddo laba 2 jeer ah Golaha Wakiillada dib ugu celiyo magacaabista xubnaha Golaha Xukuumadda ee kalsoonida waayay. Qof kasta oo lagu eedeeyo inuu hanti qaran u isticmaalay dano xisbi, maxkamad ayaa la horgeynayaa.
Muddada xilhaynta Difaacaha Xuquuqda Aadanahu waa shan sano dibna waa loo soo dooran karaa. Haddii xubin ka mid ahi Goluhu ansaxin waayo, wuxuu Guddoomiyha Golaha Wakiillada u qorayaa in ciddii soo magacowday ay ku soo badasho mudoo shan iyo toban 15 beri gudahood.
Dawladda ayaa daryeeleysa, intii karaankeeda ah, agoonta, naafada, danyarta iyo bukaanka. Qaab-dhismeedka, Laamaha, xuduudaha awoodaha iyo xilgudashada Garsoorka waxaa xadidaya dastujrka ay Xukuumaddu horgeyso Golaha Wakiillada.
Akhriso Dastuurka Cusub ee Dowlada Puntland – Puntland Voice
Dhammaan dadku waa u siman yahay Sharciga hortiisa. Somali government plans to end the transition period – HOL.
Shaqaalaha iyo loo shaqeeyayaashuba waxay xaq u leeyihiin iney yeeshaan ururro maareeya una dooda danahooda.